China Energy ihe ọ drinkụ drinkụ na-ejuputa igwe ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ya | Higee
Igwe ihe ọ energyụ drinkụ anyị na-a fillingụ na-arụ ọrụ na-etinye mmiri rinsing, na-ejuputa ma na-ekpuchi igwe n'ime igwe monoblock. A na-eme usoro atọ ahụ n'ụzọ zuru ezu na akpaghị aka. Na-ejuputa karama PET ma ọ bụ karama iko ma ọ bụ karama niile nwere ike ịhazi.
Ihe ọ Dụ Dụ na-ejuputa igwe 3 na 1 Monobloc Production Line
2.Energy na-a fillingụ ihe ọ fillingụ fillingụ na-ejuputa igwe (Washingsa / njuputa / ntinye 3-na-1 mono-ngọngọ)
Kalama ahụ na-abanye n'ime akụkụ rinsing nke igwe atọ na otu site na ikuku ikuku. Gripper arụnyere na rotary disk na-ejide karama ma gbanwee ya karịa ogo 180 ma mee ka ihu ala ahụ dị ala. Na mpaghara rinsing pụrụ iche, ihe mkpuchi na gripper na-agba mmiri iji kpochapụ kalama karama. Mgbe ịsacha ma kpochaa, karama ahụ gbanwere ogo 180 tinyere okporo ụzọ na-eduzi ma mee ka ụkọ mmiri na-eche ihu igwe. Mgbe ahụ, mmiri mmiri rinsed na-ebufe na akụkụ ndochi site na poking karama starwheel. Kalama ahụ nke na-abanye n'ime nzacha na-ejide ya n'olu na-ejide efere. Mbadamba ndochi nke cam mere nwere ike ịghọta na elu. Ọ na-anabata ụzọ nrụgide. Igwe na-ejuputa mepee ma malite ijuputa mgbe ọ na-agbada ma metụ ọkpọ ahụ ahụ, valvụ ahụ na-ejupụta na-ahapụ ma na-ahapụ ọkpọkọ ahụ mgbe ọ gwụchara, a na-ebufe karama zuru ezu na akụkụ ntinye site na-ejide olu ntụgharị. Mma nkwụsị nkwụsị na-ejide ọkpọ, na-eme ka karama kwụ ọtọ adịghị agbanwe. Isi a na-ekpuchi ekpuchi na-eme mgbanwe na nkwanye ugwu. Ọ nwere ike ịmechaa usoro ịkụnye ihe niile gụnyere ijide, ịpị, ịghasa, ịhapụ ihe cam ahụ mere. A na-ebufe karama zuru ezu na onye na-ebufe ihe na kalama gaa usoro ọzọ site na kpakpando. A na-ekpuchi windo niile na windo, elu nke windo mechiri emechi dị elu karịa elu nke 3 na igwe 1, na ala nke windo mechiri emechi nwere nloghachi ikuku
● Ewezuga usoro ala, akụkụ nnyefe na akụkụ ụfọdụ ga-abụrịrị nke ihe pụrụ iche. A na-eji akụkụ nchara 304 mee igwe ndị ọzọ.
● A na-eji igwe anaghị agba nchara igwe na-ebu ihe, a na-eji ihe EPDM rụọ mgbanaka akara ahụ, ọ bụkwa UMPE bụ plastik.
A-ri Ejiri igwe anaghị agba nchara igwe, ebe a na-ejigide mkpịsị aka na igwe anaghị agba nchara, ma e jiri ya tụnyere ọdịnala roba, ọ dị ọcha, na-adịgide adịgide, na-enweghịkwa ngwa ngwa ngwa, akụkụ ịchafụ nke karama nwere ike zere imetọ ya site na gripper roba.
A-Gripper nke nwere ihe eji agba mmiri nke ọma, ọ nwere ike ịmalite n'ọnọdụ ọ bụla nke mgbidi karama ahụ, ma nwee ike ịchekwa mmiri ịsacha. E nwere ihe mkpuchi dị n'elu ihe ịgba agba nke nwere ike igbochi ịwụfu mmiri; na e nwere regulatory egweri oghere na egweri ọkpọkọ n'okpuru nozzles.
Rinsing oge nwere ike ekwe nkwa maka 2 sekọnd.
● Site na ịhazigharị ihe dị elu nke akụkụ rotary iji gbanwee maka kalama dị iche iche
A na-enweta mkpali ahụ site na sistemụ na-ebugharị na usoro a gafere site na gear.
● A na-ejikwa valvụ solenoid na-enye mmiri rinsing.
Anakwere akara a na-egbochi mgbochi nke na-ejide onwe ya nke nwere ike belata mmetọ nke imeju gburugburu.
● The rotate efere ka nke igwe anaghị agba nchara 304, big flat toothed bear.
Valve A na-ebute valvụ a na-arụ ọrụ nrụpụta nke mba ọzọ dị elu na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, enweghị akpa akuku ọcha, akụkụ akara aka ole na ole, na njikwa njikwa ọkwa mmiri. The dum valvụ ka nke nri ọkwa igwe anaghị agba nchara.
● Mbadamba na-ejuputa mepee ma malite ijuputa mgbe ọ na-agbada ma metụ ọkpọ ahụ, valvụ ahụ na-ejupụta na-ahapụ ma hapụ ụma ahụ mgbe ọ gwụchara.
● Onunu na-a adopụ ihe ọ theụ adopụ na-eme ka ihe na-eme ka mmiri na-arụ ọrụ na-akpaghị aka.
● A na-anabata ihe eji eji ihe eji eme ihe, nke nwere ike belata mmetọ nke juputara na gburugburu ebe obibi. Gbagharị a na-eji igwe anaghị agba nchara, a na-eji ihe EPDM mee mgbanaka akara ahụ, a na-eji plastik mee UMPE.
● Ihe na-akpali ihe nzacha na-esite na sistemụ na-ebugharị na usoro ma na-agafe site na gear.
A-● The isi mbanye adopts gia draịva, na elu arụmọrụ, ala mkpọtụ, ogologo ndụ, mfe mmezi, zuru oke mmanu, griiz nwere ike iho mmanu centralizing na-akpaghị aka, adopts transducer ka ọsọ nke isi moto ịchịkwa, igwe jiri nzọụkwụ-obere ugboro akakabarede oge . Ihe maka ikpo okwu na okpokoro nile bu nchara carbon na igwe nchara n’èzí.
● PLC na-achịkwa igwe na-akpaghị aka, mmejọ na ngosi akara, dị ka ngọngọ karama, ụkọ okpu wdg.
Akụkụ ndị bụ isi na ihe eletriki igwe dị na ngwaahịa na-anabata ngwaahịa mbubata.
Ngwa a bụ ogo kachasị elu nke igwe 3-in-1, ọ dị mkpa maka igwe ahụ ka ọ na-agba ọsọ na ogo ngwaahịa.
A na-atụgharị isi isi (akụkụ ndị bụ isi nke nwere ike ime ka obi sie ike), ọkachamara ahụ ka mma nhazi nke ígwè magnetik, mmelite a nwere ike belata ntụpọ ntụpọ nke ịka mma na ọdịdị ọdịnala nke dị mfe ịtọzi ma dozie nsogbu nke ịmegharị ihe. isi.
Head Isi nkedo isi bu uzo abuo: o kwesiri maka okpu di iche iche na okpu egwuregwu.
A-device Ngwaọrụ nwere ike wepụta okpu mkpuchi ma gbochie ya ịfefe okpu a na-edozi ya na ndu ndu okpu.
● Otu ìgwè ndị na-atụgharị foto foto gbanwere na ndu ndaba. Igwe ahụ ga-akwụsị mgbe enweghị okpu na ntuziaka ahụ.
Detect Ihe mkpuchi ọkpọ kalama na-agbanwe na tebụl ịghasa.
● E nwere nozzles dị n'etiti ntugharị na-agba ọsọ na-ejuputa akụkụ iji kpochaa ngwaahịa ahụ zuru ike na akụkụ ịmịcha ihe.
A-cyl E nwere okpuru mkpọchi mkpọchi na nkwonkwo n'etiti ntuziaka na-ada ma na efere poking. Ọ bụ ịghọta na ọ dịghị nri ọ bụla okpu.
● Site na ịhazigharị ihe dị elu nke akụkụ rotary iji gbanwee maka kalama dị iche iche.
A na-enweta mkpali nke kọmpụta ịghasa site na sistemụ na-ebugharị na usoro ma gafee gear.
● A na-edozi isi ihe ndị na-eme ka ịchọọ ihe na-arụ ọrụ site na nhazi nhazi dijitalụ
Onye na-ebu okpu na-ebufe okpu ya na igwe mkpuchi okpu.
Ọ nwere ọrụ nke enweghị karama enweghị okpu na-ebugharị, njikwa na-akpaghị aka.
Enwere onye na-achọpụta ihe na sorter okpu, mgbe okpu ezughị, onye nchọpụta na sor sor na-enweta mgbaàmà nke enweghị okpu, mbuli okpu na-amalite. Ihe mkpuchi ndị dị na tank ahụ na-agafe na eriri ebufe na okpu sorter. Ọ nwere ike ịgbanwe nha ụgbọ mmiri tankị site na bọọdụ ahụ; nke a nwere ike idozi ọsọ nke okpu na-ada.
4. Onye na-ebu belt
Nke gara aga: Non-carbonated onunu ndochi Line
Osote: PITA karama ihe ọ Hotụ Hotụ Hot ndochi Machine
Carbonated ihe ọ softụ drinkụ dị nro na-ejuputa igwe
Non-carbonated onunu ndochi Line